Repoblikan' i Kôngô - Wikipedia
Repoblikan' i Kôngô
(tonga teto avy amin'ny Kongo-Brazavily)
Ny Repoblikan' i Kôngô na Kôngô-Brazzaville dia firenena ao amin' ny faritra afovoan' i Afrika. I Brazzaville no renivohiny. Mifanefi-tany amin’ ny Repoblika Demôkratikan’ i Kôngô ao atsimo sy ao atsinanana, amin’ i Angôla ao atsimo-andrefana, amin’ i Gabôna ao andrefana ary amin’ i Kamerona ao avaratra-andrefana izy. Manana morontsiraka mirefy 220 km amin’ ny Ranomasimbe Atlantika izy ary manana velaran-tany mirefy 342 000 km2. Isan' ireo firenena farany mahantra ny Repoblikan' i Kôngô.
Sainam-pirenen'ny Repoblikan'i Kôngô
1 Tantaran' ny Repoblikan' i Kôngô
1.1 Talohan' ny fanjanahan-tany
2 Jeôgrafian' ny Repoblikan' i Kôngô
2.1 Toerana misy azy
2.2 Ny toetany, ny rano sy ny zavamaniry ary ny biby
2.3 Ny mponina
2.4 Ny toekarena
3 Ny kolontsaina
3.1 Ny fiteny
3.2 Ny fivavahana
Tantaran' ny Repoblikan' i KôngôHanova
Talohan' ny fanjanahan-tanyHanova
Ny Pigmea Mboty no mponina voalohany tao amin' ny faritra misy ny Repoblikan' i Kôngô ankehitriny. Niorim-ponenana tao koa tamin’ ny fiandohan’ ny fanisan-taona iraisana ny Banto. Ireo fanjaka-mpanjaka roa lehibe dia ny fanjakan’ i Lôangô sy fanjakan’ i Kôngô. Ny fanjakan’ i Lôangô dia fanjakana miankina amin' ny fanjakan’ i Kôngô. Ny faharavan’ ny fanjaka-mpanjaka, ny fivarotana andevo, ny ady mitam-pidiana dia nanakorontana ny fiainan’ ny mponina.
Ilay Frantsay atao hoe Pierre Savorgnan de Brazza dia nitety manontolo ny tany misy an’ i Kôngô ankehitriny tamin’ ny taona 1879 hatramin’ ny 1880. Nanao sonia fifanarahana tamin’ ny mpanjaka izy, ka nametraka an’ izany tany izany ho eo ambany fiarovan’ ny Frantsay. Tamin’ ny taona 1903 dia nomena ny anarana hoe Moyen-Congo ilay faritra ary lasa zanatany frantsay. Ny fanjanahan-tany frantsay dia niavaka noho ny fanorenana kômpania izay nanana velaran-tany midadasika sy nitrandraka ny harena voajanahary, sady nampiasa ny mponina tompon-tany amin' ny fomba tsy mendrika ny maha olombelona. Nanomboka tamin’ ny taona 1944 dia namory ny solontenan’ ny tanin’ ny Empire colonial français ny i Charles de Gaulle ka namolavola ny fototry ny Union française. Tao Brazzaville no naovany kabary tamin’ ny taona 1946 sy 1958 nanambaràny ny fampitsaharana ny fanjanahan-tany.
I Fulbert Youlou tamin' ny taona 1959.
I Denis Sassou-Nguesso tamin' ny taona 2014
Taorian’ ny fanaovana fitsapan-kevi-bahoaka tamin’ ny taona 1958 dia nahazo ny fahaleovan-tenany i Moyen-Congo tamin’ ny 15 Aogositra 1960 ka niova anarana hoe Repoblikan’ i Kôngô. Ny filoham-pirenena voalohany dia i Fulbert Youlou, izay voaongana telo taona taty aoriana nandritra ny fikomian’ ny vahoaka tamin’ ny taona 1963. Nifanesy ny fanonganam-panjakana. Ireto ny nifandimby voalohany teo amin’ ny fitondrana: i Alphonse Massemba-Débat, ny kapiteny Raoul, Marien Ngouabi, i Yhombi-Opango ary i Denis Sassou-Nguesso. Lany ho filoham-pirenena tamin’ ny fifidianana natao tamin’ ny taona 1992 i Pascal Lissouba. Nampangain’ i Denis Sassou-Nguesso ho mpanavakavaka sy mpanao didy jadona i Pascal Lissouba. Velona ny disadisa ka noravana ny Antenimiera tamin’ ny taona 1992. Nanajaka ny ady an-trano izay nahafaty olona an-ketsiny maro hatramin’ ny taona 1993 ka hatramin’ ny 1999. Nisy ny fanovana lalàm-panorenana izay nolanina tamin’ ny fitsapàn-kevibahoaka tamin’ ny taona 2002 ary lany tamin’ ny fifidianana filoham-pirenena i Denis Sassou-Nguesso tamin’ io taona io ihany. Nisy ny tsikera momba ny tsy fisian’ ny mangarahara sy ny tsy fanarahan-dalàna, nefa ny fifidianana filoham-pirenena sy ny fitsapan-kevi-bahoaka natao dia efa dingana lehibe vita amin’ ny fampandriam-pahalemana. Lany ho filohan’ ny Repoblika indray i Denis Sassou-Nguesso tamin’ ny taona 2009.
Jeôgrafian' ny Repoblikan' i KôngôHanova
Toerana misy azyHanova
Ny Repoblikan' i Kôngô dia firenena ao Afrika Afovoany izay hodidinin' ireto firenena tanisaina manaraka ireto: i Gabôna ao andrefana, i Kamerona ao avaratra-andrefana, i Angôla ao atsimo-andrefana, ny Repoblikan' i Afrika Afovoany ao avaratra-atsinanana, ary ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô ao atsinanana sy ao atsimo. Mamakivaky ny Repoblikan' i Kôngô ny fehiben-tany, eo amin' ny tanànan' i Makoua, ao amin' ny faritr' i Cuvette. Mitodika mankany amin' ny Ranomasimbe Atlantika io firenena io izay manana morontsiraka mirefy 220 km.
Ny toetany, ny rano sy ny zavamaniry ary ny bibyHanova
Toetanim-pehibe na ambanim-pehibe no hita any amin’ ny faritra farany atsimo amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Mafana sady mando izany toetany izany ka manorana mandritra ny fito volana ary maina eo anelanelan’ ny volana Jolay sy Aogositra. 25 °C ny sala-maripana. Ao amin’ ny faritra avaratra izay andalovan’ ny fehiben-tany dia be orana mahatratra 2 000 mm isan-taona. Toraka izany koa ny eny amin’ ireo lembalemba Bateke. Ny ao amin’ ny lohasahan’ i Niari anefa tsy mahazo afa-tsy 1 200 mm isan-taona.
Ny ony Congo dia ony faharoa eto an-tany amin' ny salan-kabetsahan' ny rano entiny, ka manarakaraka an' i Amazôna izy amin' izany. Io ony io dia sisin-tany manasaraka ny Repoblikan' i Kôngô sy ny Repoblika Demôkratikan' i Kôngô.
Ny alam-jana-pehin-tany mando dia mivelatra ka mandrakotra mihoatra ny antsasaky ny veleran-tanin' ny Repoblikan' i Kôngô (raha tsy ny roa ampahatelony), ka mahatonga io firenena io hoheverina ho firenena faha-15 amin' ny tahan' ny fandrakofan' ny ala.
Maro isan-karazany ny biby ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô, ka isan’ izany ny antilôpa, ny jirafa, ny geparda, ny voay, ary ny vorona sy bibilava maro.
Misy mponina mihoatra ny 5 000 000 ny ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô (taona 2018), izay firenena manana mponina kely hakitroka (13 mp/km2). Ny ankabeazan' ny mponina ao aminy (mahatratra 62,2 %) dia monina an-tanàndehibe, indrindra ao Brazzaville sy ao Pointe-Noire, izay samy miorina ao amin' ny tapany atsimon' ilay firenena. Miisa 1 100 000 any ho any ny mponina ao Brazzaville fa ny ao Pointe-Noire kosa miisa 650 000 ny ao Loubomo (na Dolisie taloha) dia misy mponina miisa 100 000. Misy tanàna hafa folo koa izay ahitana mponina mihoatra ny 10 000 avy.
Bebe mponina ihany koa ireo faritra ambanivohitra ao atsimo (anelanalen' ny 5 sy 14 mp/km2), ka ao amin' ny faritr' i Boko sy ny manodidina no tena be mponina amin' izany. Ny tapany avaratr' ilay firenena dia vitsy dia vitsy mponina (hakitroka: 0 hatramin' ny 3 mp/km2), indrindra ny ao amin' ny faritra be honahona ao avaratra-atsinanana.
Ireto ny vondrom-poko ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô, izay samy vahoaka banto:
ny vondrona Kôngô na Bakôngô (Kongo na Bakongo): 40,5 %;
ny vondrona Teke na Bateke (Téké na Batéké): 16,9 %,
ny vondrona Mbôsy (Mboschi): 13,1 %; isan' io ny foko Makoa (Makoua);
ny vondrona Sanga (Sangha): 5,6 %.
Ny solitany no loharanon-karena an-kibon' ny tany lehibe indrindra ao amin’ ny Repoblikan’ i Kôngô izay firenena afrikana fahefatra amin’ ny famokarana solitany tamin’ ny taona 1982. Ny loharanon-karena hafa dia ny pôtasy, ny volamena, ny vy, ny firaka, ny varahina, ny fanitso ary ny manganezy. Ny 95 %n' ny varotra dia sahanin' ny vahiny avy amin' ny firenena hafa na manam-piaviana avy any ivelany.
Na dia manan-karena amin’ ny solitany an-dranomasina sy ny tanjaky ny seranan-tsambo aza ny Repoblikan’ i Kôngô, ny toekaren’ ity firenena ity dia mbola mila fanarenana lehibe taorian’ ny taona maro nitantanan’ ny fanjakana ny toekarena sy nisian’ ny ady an-trano. Ny faharetan’ ny tsy fandriam-pahalemana sy ny fampihenana 50 % ny sandan’ ny vola farantsa CFA dia isan’ ny nampihena ny PIB, izay niala avy amin’ ny 3 000 000 000 $ tamin’ ny taona 1993 mankany amin’ ny 1 780 000 000 $ tamin’ny taona 1995.
Ny 30 %n’ ny mponina dia mpamboly izay miantoka ny 13 %n’ ny PIB. Ny fambolena voly fihinana no tena sahanin’ ny olona: ny mangahazo (60 %n’ ny tany voavoly), ny vomanga, ny iniamy, ny katsaka, ny akondro, ny vary ary ny voanjo. Ny voly fanondrana dia ny palmie fanaova-menaka izay volena ao amin’ ny lempona kôngôley, ny fary, ny voanjo ary ny paraky eny amin’ ireo lembalemba Batéké, ny kafe, ny kakaô ary ny akondro.
Ny fitrandrahana ny zava-misy anaty ala (ny hazo, ny kakaô, ny kafe, ny ny palmie fanaova-menaka, izay vokarina amin’ ny faritra misy ala) dia mandray anjara manatevina ny vokatra fanondrana.
Ny mponina tsirairay ao dia miteny amin’ ny fitenin’ ny vondrom-poko misy azy. Samy fiteny banto ireo fiteny ireo. Ny lalàm-panorenana kôngôley dia manao ny fiteny lingala sy kitoba ho fitenim-pirenena ifaneraserana. Ao koa ny fiteny mônôkotoba izay tenenina ao atsimo. Ny fiteny frantsay no fiteny ôfisialin’ ny Repoblikan’ i Kôngô. Tamin' ny taona 2010 dia nahatratra ny 56 %n' ny mponina kôngôley ny mpiteny frantsay, ka ny 78 %n' izany dia mihoatra ny 10 taona, izany no maha laharana faharoa azy manerana an' i Afrika, aorian' i Gabôna, raha ny isan-jato no heverina.
Ny Repoblikan’ i Kôngô dia firenena anjakan’ ny fampifangaroana fivavahana. Mihoatra ny antsasaky ny mponina manontolo no mitonon-tena ho Kristiana, ka Katôlika ny 35 hatramn' ny 50 % ary Prôtestanta ny 15 % hatramin' ny 20 %. Ny sekta mpampifangaro fivavahana no tena miely kokoa. Ny fantatra indrindra amin’ ireo sekta ireo dia ny kimbangisma. Ny animisma sy ny fivavahan-drazana dia mbola be mpanaraka ao avaratra (50 %). Any amin’ ny faritry ny hivoka sy amin’ ny tanan-dehibe no ahitana ny fivavahana silamo (2 %).
Tantaran' ny Repoblikan' i Kôngô
Toekaren' ny Repoblikan' i Kôngô
Jeôgrafian' ny Repoblikan' i Kôngô
Kolontsaina ao amin' ny Repoblikan' i Kôngô
Afrika Atsimo - Alzeria - Angôla - Benino - Borkina Fasô - Borondy - Bôtsoana - Ejipta - Eritrea - Esoatiny (Soazilandy taloha) - Etiôpia - Gabôna - Gambia - Ganà - Ginea - Ginea Bisao - Ginea Ekoatôrialy - Jibotỳ - Kamerona - Kapvera - Kenia - Kômôro - Kôtidivoara - Lezôtô - Liberia - Libia - Madagasikara - Malaoy - Malỳ - Maorisy - Maoritania - Marôka - Môzambika - Namibia - Nizera - Nizeria - Oganda - Repoblika Arabo Saharaoy Demôkratika - Repoblika Demôkratikan'i Kôngô - Repoblikan'i Afrika Afovoany - Repoblikan' i Kôngô - Roanda - Saô Tôme e Prinsipe - Seisely - Senegaly - Siera Leôna - Sodàna - Sodàna Atsimo - Sômalia - Sômalilandy - Tanzania - Tôgô - Tonizia - Tsady - Zambia - Zimbaboe
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/w/index.php?title=Repoblikan%27_i_Kôngô&oldid=1040820"
Dernière modification le 3 Desambra 2021, à 15:25
Voaova farany tamin'ny 3 Desambra 2021 amin'ny 15:25 ity pejy ity.